Njem Budapest, ihe ihu ma mee I | Akụkọ Njem
Njem na Budapest, ihe na-ahụ ma na-eme m
Budapest A maara ya dị ka pealu nke Danube, ma ọ bụghị obere, n'ihi nnukwu mma ya. Obodo a na-esite na njikọ nke ndị ọzọ abụọ, Buda na Pest, ọ bụ ezie na ọ bụghị ebe a na-ahụkarị, ma e jiri ya tụnyere obodo ndị dị ka London ma ọ bụ Prague, eziokwu bụ na ọ nwere ọtụtụ ihe iji nye ndị ọbịa ya.
Obodo nwere ulo uku di omimi juputara na ya ebe ịchọpụta, ndị omeiwu mara mma na ọtụtụ ụlọ ochie na nke ọma echekwara nke ọma na-enye ìhè n'abalị. Ọ bụkwa ebe dị mma iji zuru ike na spa, ịga ahịa mgbe ị gara ileta ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ya niile.
1 Buda Castle na labyrinth ya
2 Echiche si na Basis nke Onye Ọkụ azụ
3 Ochie Chain Bridge
4 Ndị omeiwu ama ama nke Budapest
5 Opera mara mma nke Budapest
6 Zuo ike na spa
7 Ppingzụ ahịa na Budapest
Buda Castle na labyrinth ya
Foto nke xosema
El Dalọ Buda Ọ bụ ihe a ga-ahụ n'obodo ahụ. N'ime ya anyị nwere ike ịchọta Budapest History Museum, Library na Széchenyi na Hungary National Gallery. Iji ruo ebe ị nwere ike ịga ije, kamakwa site na ọchị. Otu n'ime nhọrọ ndị njem na-ejikarị bụ ịga egwuregwu na-agbada. Otu n'ime ihe ịtụnanya dị na nnukwu ụlọ a bụ ụlọ nyocha oge ochie ya, nke mmadụ na-ekeghị, mana mmiri mmiri ọkụ na-akpụ ya site na isi mmiri dị na nnukwu ugwu nke ugwu. Lablọ nyocha ndị a nwere ọgba, okpuru ala na mmiri ma nwee ọtụtụ ojiji, site na ịbụ ebe mgbaba n'oge oge gara aga rue cell, okpuru ulo, ụlọ ahụhụ, ụlọ ọgwụ ndị agha ma ọ bụ ebe nchekwa. Anyi aghaghi ilele ma oburu na anyi abanye na ulo nyocha, ebe obu na anyi aghaghi ileghara anya.
Echiche si na Basis nke Onye Ọkụ azụ
El Basis nke Onye Ọkụ azụ Ọ bụ ebe mara mma dị na ugwu Buda. Ọ bụ ezie na echiche ndị ahụ abụghị ihe pụrụ iche, n'onwe ya ala ala ga-abụ ebe a ga-eleta, ebe ọ bụ na ogidi ya na nkọwa ya na-eme ka ọ dị ka anyị nọ ebe akụkọ ifo. O nwere ụlọ elu asaa, nke na-anọchite agbụrụ asaa ndị guzobere Hungary. O nwekwara oke echiche banyere osimiri na nzuko omeiwu.
Ochie Chain Bridge
Nke a bụ akwa mara mma na kasị ochie na obodo, na-ejikọ Buda na Pest. A ghaghi ikwu na nke anyi huru taa bu nwughari nke akwa ozo, site na 1849, nke bibiri n'oge Agha Worldwa nke Abụọ. Otu n'ime ihe ị ga-eme bụ ịhụ ka ọ na-enwu enwu ma jeekwa ije na ya isi n'otu akụkụ obodo gaa na nke ọzọ.
Ndị omeiwu ama ama nke Budapest
El Nzuko omeiwu nke Budapest Ọ bụ otu n'ime ụlọ ihe nnọchianya kachasị na obodo ahụ, nwere ụdị ọhụụ Neo-Gothic mara mma. Ọ na-adọrọ mmasị ma n'ime ma n'èzí, n'ihi ya, ọ bara uru nleta gị. Have ga-azụta tiketi ma ọ ka mma ma ọ bụrụ na ha dị n'ihu, n'ihi na ọ na-enweta ọtụtụ nleta. N'ime ụlọ anyị nwere ike ịnụ ụtọ thelọ Dome ahụ na ihe oyiyi nke ndị eze nke Hungary ma ọ bụ Houselọ Elu Old Old nke anaghịzi eji maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị mana ebumnuche ndị njem kama ọ bụ ebe anyị niile chere na arụmụka nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mba ahụ. N'akụkụ nzuko omeiwu ị nwekwara ike ịhụ akpụrụ akpụ nke Akpụkpọ ụkwụ na Danube, nke na-echeta ndị Juu niile lara n'iyi n'oge Agha IIwa nke Abụọ.
Opera mara mma nke Budapest
Opera bu ulo ohuru nke Renaissance nke di nnukwu mkpa n’obodo. ọ ga-ekwe omume gaa njem njegharị, ebe ị pụrụ ịhụ akụkụ nile nke opera ma mụta ihe na-atọ ụtọ banyere akụkọ ntolite ya na ịmata ihe. Agbanyeghị, n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụahịa anyị nwere ike ịhụ opera na igbe dị n'akụkụ, yabụ anyị kpebiri ihe ga-akwụghachi ụgwọ.
Zuo ike na spa
A maara Budapest dị ka obodo Spas, ọ nwere mmiri ruo 118, ọtụtụ ihe okike na ndị ọzọ bụ aka. Enwere ọtụtụ ịhọrọ site na, na anyị ga-eburu n'uche na ụbọchị ụfọdụ echebere maka ndị nwoke na-ege ntị na ndị ọzọ maka ụmụ nwanyị, ọ bụ ezie na e nwekwara ndị agwakọtara. Otu n'ime ndị ama ama bụ Gellert Spa, nke dị n'ime ọdọ mmiri n'ime ụlọ nke nwere ike ịdị ka ọ dị anyị ka ọ bụ maka na ọ pụtara na fim na mgbasa ozi. The Rudas Spa bụ a mara mma Turkish bath nke ukwu ama n'obodo na Széchenyi Spa Ọ bụ nnukwu ogige nke nwere ọdọ mmiri iri na ise, atọ n’ime ha n’èzí.
Ppingzụ ahịa na Budapest
Ọ bụrụ na enwere ihe anyị nwere ike ime na Budapest, na mgbakwunye na izu ike na spas ya, ọ bụ ịnụ ụtọ ịzụ ahịa na isi ahịa n'okporo ámá obodo ahụ. Vaci Utca bụ otu n'ime ebe ndị bụ isi iji nwee ọmalị ịga ije na ịzụ ahịa. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ihe ndị ọzọ nanị, mgbe ahụ, anyị nwere ike ịga na ndị ọzọ na ụlọ ahịa n'okporo ámá pa kacha mma, na Andrássy Okporo ụzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Budapest » Njem na Budapest, ihe na-ahụ ma na-eme m